Factorylọ ọrụ China na usoro ndị na-eme ụlọ ọrụ na-emepụta ikuku na-emepụta ikuku (COPD Therapy) | Micomme
ngwaahịa nkọwa imgs
Otutu iku ume iku otutu ume ikuzi uzo ozo
Usoro Sepray I nwere ọtụtụ ụdị iku ume ume:CPAP, S, T, na S / T, VAT na PC iji gboo ndị ọrịa mkpa dị iche iche.
Ọnọdụ S / T bụ maka ndị ọrịa COPD na nke abụọ iku ume iku ume, iji mee ka ahụmịhe iku ume dị mma na nke iku ume. Ọnọdụ VAT bụ maka ndị ọrịa nwere COPD, oke ibu hypoventilation syndrome na olu dịkwa ala. Ọnọdụ PC bụ maka ndị ọrịa nwere oke iku ume ngwa ngwa, olu dị ala na hypoxemia.
Ogo mgbagha ahụ dị 4-30cm H2O. Elu mgbali elu nwere ike na-enye ọgwụgwọ dị irè ma kwụsie ike ọgwụgwọ na
Mmepụta ọsọ iji kpuchido mmetụta ọgwụgwọ.
Ihe omumu ohuru
Ihe omumu ihe omumu ohuru iji choputa ihe omume di iche iche, ghazie imezi ikike.
Teknụzụ na-ahụ maka nrụgide akpaaka nwere ike ileba anya na n'ụzọ ziri ezi ma chọpụta ọtụtụ ihe omume iku ume, nzaghachi n'oge ikuku dị ala, nsogbu mgbochi, ikuku ikuku, snoring na-aga n'ihu, wdg, ma kpochapụ ihe mgbaàmà ndị a n'ụzọ dị irè.
Akpaghị aka na-esochi
6 ụdị omume omume
Nkwuputa nrụpụta nrụpụta nke COMF
Igwe na teknụzụ enyemaka siri ike-COMF, bụ nke anyị.
Ọ nwere ike ịgba mbọ hụ na ọkwa nkasi obi, nnabata dị elu, na-akwụghị ndị nọọsụ ụgwọ iku ume site na ule nyocha na ngosipụta.
AST (Teknụzụ Mmekọrịta Akpaka)
Na-esoso iku ume onye ọrịa na-akpaghị aka, na-ekpebi oge ntụpọ nke onye ọrịa na onye nnọchi ya, ma na-enye mgbakwunye mmụọ na iku ume ya kwekọrọ; teknụzụ nke akpaka na-enweghị ike ịtọlite ​​uche, belata ọrụ iku ume onye ọrịa.
Teknụzụ Nkwa Ekwenyere Aka (VAT)
Na akpaghị aka na-atule nrụgide achọrọ iji dabaa olu agbadoro dabere na mgbanwe nke onye ọrịa ma na-enye IPAP na EPAP na-abawanye.
Ifufe siri ike ma dị mma
Buburu turbine dị 43000bpm nke nkeji dị n'otu nkeji, na-enye ikike iku ume na-aga n’ihu n’ike karịa, ịrụ ọrụ nke ọma ma nwekwaa ọfụma, ma na-akwụ ụgwọ mgbapụta ikuku dị elu. Nzaghachi ọkwa ngwa ngwa, arụmọrụ kwụsiri ike ma na-ada ụda.
Nlereanya S1 T1 T2 T3 T5 P1
Nlereanya CPAP, S, S / T CPAP S, S / T CPAP, S, TS / T, VAT CPAP, S, S / T CPAP, S, T, S / T, VAT CPAP, S, T, S / T, VAT, PC
Ogo nsogbu 4-20cm H2O 4-25cm H2O 4-25cm H2O 4-30cm H2O 4-30cm H2O 4-30cm H2O
Ikwu nrụgide ziri ezi ± 0.2cm H2O
Oke.Oru ike 30cm H2O
Oge Ramp 0 ruo 45 min （nkeji ise）
Aka enyemaka nrụgide COMF 1–3
Oke ala 1-5 ọkwa （113 ruo 185 ℉ 23 ruo 85 ℃）
Bilie Ọkwa 1-6 (S, T, S / T)
Ike nchekwa data 8G diski USB
Ibu ibu 1.72kg
Pụtara ụda larịị ≤30dB